AC Milan oo dafirtay inay la kulmeen Pep Guardiola si ay ugu bedelaan Massimiliano Allegri. - Caasimada Online
Home Warar AC Milan oo dafirtay inay la kulmeen Pep Guardiola si ay ugu...
AC Milan oo dafirtay inay la kulmeen Pep Guardiola si ay ugu bedelaan Massimiliano Allegri.
AC Milan ayaa dafirtay inay kulan la yeesheen Pep Guardiola si ay ugu bedelaan tababare Massimiliano Allegri oo waayadaan cadaadis ku saarnaa Rossoneri.
Wararkii ugu waa weynaa horaantii isbuucan ayaa soo jeedinaayey in madaxweyne ku xigeenka Milan Adriano Galliani uu la kulmay tababarihii hore ee Barcelona iyo wakiilkiisa si ay uga wadahadlaan inuu usoo dhaqaaqo San Siro, laakiin kooxdii ku guuleysatay 2011kii Horyaalka Serie A ayaa si dhaqso ah u beenisay wararkaas xanta ah.
“AC Milan waxay beenineysaa wararkii dhowaan ay saxaafadu sheegayeen kuwaas oo ahaa inuu kulan dhex maray kooxda Milan, Adriano Galliani iyo Mr. Guardiola ama wakiilkiisa,” ayaa lagu yiri warbixin lasoo dhigay Website-kooda rasmiga.
Allegri ayaa waayadaan saaxiib u ahaa cadaadis ka dib markii ay Milan si hoose ku bilaabatay sanadkaan Horyaalka, waxaana lasoo sheegayey inay Guardiola u arkaan bedelka saxda ah.
41 jirkaan ayaa dhamaadkii 2011-12 ka tegay Barcelona si uu u qaato hal sano oo nasasho ah, wuxuuna hada ku noolyahay magaalada New York ee dalka Mareykanka xilli lala xiriirinaayo inuu sanada dambe kusoo laabto xilka tababarenimo ee Kubada Cagta.